Izindaba - Ukusuka "kwenzuzo" kuya kusomabhizinisi, uLiu Jianhong weXueruisha Group uyindoda enendaba
Ukubekezela nokuphishekela amaphayona
Le yindoda enendaba. Ngokukhuthazela okunamandla, umoya onganqikazi, nokuphishekela okunenkani, umgwaqo ongaphansi kwezinyawo zakhe uhlala ugcwele ithemba, futhi welulekela phambili ngokuxhuma nemikhawulo ... Umuntu odla izinkalankala, nokho, ngokuhlaziya kwakhe okunengqondo nokwahlulela okunembile, ubelokhu ethandwa kakhulu yisiphetho sakhe njalo. Ukusuka kulokhu, yena nethimba lakhe labaphathi benze ngokucophelela-i-Baoding Xueruisha Down Products Co, Ltd. yaba yinkampani yokuqala efakwe kuhlu eBaoding ukuhlala ebhodini leShijiazhuang City.
Ubuhlakani, ukuzola, nokwenza izinto ezilula kube yimibiko yokuqala yentatheli kaLiu Jianhong. Zonke izenzo ziveza isimilo esihle. Izibuko ezimbili ebhulohweni lekhala, amagama akhulunywayo, ukumamatheka ebusweni bakhe, nolimi olunengqondo nolucacile kwenza abantu bazizwe ngaleli bhizinisi elizimele. Osomabhizinisi abakwazi ukusiza kepha bayakwazisa nokuhlonipha. Isithombe sikasomabhizinisi ojwayelekile waseConfucian saya ngokuya sicaca njengoba nengxoxo iqhubeka.
Ngamaphupho, usomabhizinisi omkhulu
Ngo-1973, uLiu Jianhong wazalelwa emndenini wabadobi eDazhangzhuang Village, eBaiyangdian, e-Anxin County. Ngo-1990, wangeniswa esikoleni esiphakeme ngenxa yobunzima bezezimali ekhaya futhi kwadingeka ayeke izifundo zakhe. Ngemuva kokuyeka isikole, u-Liu Jianhong waya efemini ese-Anxin County ukuyosebenza njengomsebenzi wokuhlwaya uboya. Ukukhishwa izinwele kwakuwumsebenzi onzima futhi okhandlayo. U-Liu Jianhong akazange adambe noma adlale ngokushelelayo. Uvuke ekuseni wabingelela umnyama wasebenza kanzima. Ngokushesha uzuze ukwazisa nokwethenjwa komphathi wefektri. , Wanyuselwa kuma-accountant esikhathini esingaphansi kwengxenye yonyaka.
Ngo-1992, nge-yuan engama-20 000 ayilondoloze emsebenzini wesikhashana kanye nephupho lokuqala ibhizinisi, wabambisana nabangane bakhe ukuya eningizimu eGuigang City, eGuangxi, futhi waqala ukuhweba ngamafilimu nokuthengisa okuluhlaza. Ngemuva kweminyaka emithathu yokusebenza kanzima, ngo-1995, uLiu Jianhong oneminyaka engama-22 wayenezigidi zemali, futhi waba ngumnikazi omncane kunabo bonke baseDazhangzhuang Village evela emndenini ompofu. Wathembela ekusebenzeni kanzima nasekuzimiseleni ukumba "imbiza yokuqala yegolide".
IPhoenix nirvana, vuka futhi
Ngenkathi uLiu Jianhong ehlanganisa izinsizakusebenza futhi elungiselela ukwenza umsebenzi wakhe ube mkhulu, wahlangabezana nezingqinamba ezinkulu kakhulu. Ngo-1996, ngenxa yokuthi wayezimisele ngempumelelo. Isamba semali sitshalwe ngokunganaki, futhi cishe i-yuan yesigidi eqoqwe ngomsebenzi onzima yaphonswa ngobusuku obubodwa. Ukuze baphile, uLiu Jianhong nonkosikazi wakhe bathengisa inyama yokugcoba emgwaqweni. Lezi zithandani zisebenze kanzima unyaka zonga ama-yuan angama-20 000. Ngo-1997, uLiu Jianhong wathwala ama-yuan ayizinkulungwane ezingama-20 ephaketheni lakhe waya eGuangxi futhi eyofuna amathuba ebhizinisi ngephupho lakhe. Ngemuva kweminyaka emi-5, inani elifanayo lalingama-yuan angama-20 000, ngaphinde ngaya endaweni efanayo. U-Liu Jianhong wayegcwele imizwa, kepha ngokungafani nesikhathi sokugcina, unolwazi oluningi nokuzethemba. Uthando lwakhe kwezamabhizinisi luqinile futhi uzimisele kakhulu ngamaphupho akhe. Ukuphishekela kuyaphikelela, futhi ngesikhathi esifanayo kunesibindi futhi kukhuthele ngokwengeziwe, futhi kuvuthiwe futhi kuzinzile kuneminyaka emihlanu edlule.
Ngenkathi esesha kanzima, uLiu Jianhong ngephutha wathola ukuthi indawo yokuhlatshwa lapha yayiqoqe imfucumfucu ethile eyayihlolwe yizicucu zamadada. Okuhlangenwe nakho wayekubona shazi ukuthi lezi zinto zokungcola ziqukethe uboya obuningi. Wacabanga ukuthi uma engahlukanisa izinwele, usengakwazi ukwenza imali. Ngakho-ke, usebenzise imali engaphezu kwama-yuan angama-20 000 ukulayisha ngaphezulu kwezinkukhu ezingaphezu kuka-30,000 wakuthutha wabuyela ekhaya. Ngemuva kwezinsuku eziningana nobusuku bokulwa, wahlukanisa amakati angaphezulu kuka-10 000 woboya futhi wenza inzuzo ephelele ngama-yuan angaphezu kwama-200,000. Indlela enomoya nemvula ngayo, intwasahlobo eminingana nekwindla, umoya, isithwathwa, iqhwa nemvula kushaya ama-rapids. Eminyakeni edlule, uLiu Jianhong uqoqe inani elithile lenhlokodolobha.
Ukwenza nje izinto zokusetshenziswa kungaba "yinzuzo" kuphela, hhayi usomabhizinisi. Ngo-1999, uLiu Jianhong wabhalisa iJinlida Down Products Factory, wabhalisa umkhiqizo, futhi wangena ngokusemthethweni emkhakheni wokukhiqiza umkhiqizo. Wangena ezimakethe izinyanga ezimbalwa, ehlaziya ngokucophelela imakethe, futhi wahlela nezinhlelo zokukhiqiza umkhiqizo nezinhlelo zokumaketha. Ngokuya ngefilosofi yebhizinisi, besilokhu sigcizelela ukuthi "uzuze amakhasimende ngobuqotho futhi uthuthukise izimakethe ngokuhlakanipha". Kwezokuphathwa kwebhizinisi, ubelokhu egcizelele njalo ukuthi "isayensi nobuchwepheshe yizona zinto ezikhiqiza kakhulu". Ngaphansi kobuholi bukaLiu Jianhong, ifektri yakhiqiza iqoqwana lokuqala lama-duvets futhi lawakhuthaza futhi lawathengisa ngeziteshi ezahlukahlukene. Kusukela ebusika bango-2000, ibinezitolo ezingaphezu kwama-50 zama-franchise, izitolo ezingaphezu kuka-20 zokuthengisa, namafemu emadolobheni ahlukahlukene nasezifundeni ezisenyakatho. Imboni igcwele ubungqabavu nobungqabavu. Njengoba inkampani ithuthuka, uhlala ecabanga ngayo: Ukuze ibe nkulu, inkampani kufanele ibheke emakethe nasemhlabeni.
Intuthuko eqhubekayo, iye ezingeni eliphakeme
Ingcezu yophaphe oluncane ayinakho okuqukethwe kobuchwepheshe obuphansi. U-Liu Jianhong uholele inkampani ukuthi iphikelele ekukhiqizeni ngokuqinile ngokuya ngamazinga omhlaba. Lapho nje imikhiqizo ephansi iphuma, yamukelwa abathengi futhi yawina i- "National Excellent Product", "Hebei Famous Brand", "Hebei Famous Brand", ne- "Consumer". Labo abangawethemba umkhiqizo "," inkontileka neyunithi enokwethenjelwa "neminye imiklomelo. Ukuthuthukiswa kwemikhiqizo ephansi, ukwenziwa kwemikhiqizo ephansi, kanye nokukhuthazwa kwesiko lezinkampani eseziphenduke izingqinamba ezicatshangelwe nguLiu Jianhong nethimba lakhe Ngokufika kweminyaka yolwazi nge-Intanethi, uLiu Jianhong wayehambisana nezikhathi, waqoqa imininingwane eminingi yezimakethe nge-Intanethi, wathengisa imikhiqizo yenkampani online, waqalisa ama-oda nokuthengisa ezweni lonke, futhi ukuthengisa kwenyuka ngo-50%.
Ngo-2003, u-Liu Jianhong washintsha ngokusemthethweni igama le-Jinlida Down Products Factory laba yi-Anxin County Liteshu Down Products Co., Ltd., futhi wakhulisa izinhlobo zomkhiqizo ngaphansi komkhiqizo we- "Liteshu", kusukela ku-duvet yokuqala eyodwa kuya ezikhwameni zokulala phansi, eziningi imikhiqizo efana namabhantshi phansi namakhushini aphansi. Ngo-2005, i- "Liteshu" yonke yadlulisa isitifiketi se-ISO9001: 2000 somhlaba jikelele sokulawulwa kwekhwalithi. U- "Liteshu" uzuze ukwethenjwa ngekhwalithi, wathola inombolo enkulu yama-oda, waqala ukungena emakethe yamazwe omhlaba. Ukuthengiswa komkhiqizo wenkampani kwafinyelela izingcezu ezingaphezu kwezingu-100,000 ngalowo nyaka, futhi inani lokukhipha ladlula ama-yuan ayizigidi ezingama-50. Ngo-2006, inkampani "iLiteshu" neFrance Saint Laurent • I-Xueruisha (International) Garment Co., Ltd. yajoyina amabutho ukubhalisa nokusungula i-Baoding Xueruisha Down Products Co, Ltd., futhi yasungula uchungechunge lwemikhiqizo "brand Xueruisha". Ngo-2009, wafaka imali eningi ukudala uphawu lokuhweba oludumile i- "Edelweiss", okuyisona sikhulu saseXueruisha. Imikhiqizo ithengisa kahle emadolobheni amaningi amakhulu naphakathi njengeBeijing, iTianjin, iShanghai, iChongqing, njll., Futhi ibalwa phakathi kwezindawo eziphakeme zokuvakasha kwezemfashini ebusika eYurophu naseMelika, futhi kuthandwa ngamakhasimende kula mazwe nezifunda. Ngo-2010, uXueruisha utshale imali eningi ekutholeni izinkampani eziyisihlanu ezinkulu zamadada eShandong, ngokukhiqizwa kwansuku zonke kwezimpaphe zedada eziyi-190,000, futhi kancane kancane wakha iphethini yokusebenza kokuma ngakunye kwezolimo, izimboni kanye nezohwebo. NgoMeyi 27, 2014, iXueruisha Down Products Co, Ltd. yabalwa ngempumelelo njengenkampani yokuqala eBaoding ukuhlala ebhodini elikhulu leShijiazhuang City. Eminyakeni engama-20 edlule, iXueruisha Down Products Co., Ltd. ithenge, yacubungula futhi yathengisa cishe amathani angu-50 000 ezimpaphe; ikhiqize futhi ithengise imikhiqizo ephansi eyizigidi eziyi-2.2 Konke lokhu kwenza uLiu Jianhong agcwale ukuzethemba ekuthuthukisweni kwenkampani esikhathini esizayo.
U-Liu Jianhong wethule ukuthi inkampani isungule imakethe yaphesheya yemikhiqizo yejakhethi ephansi, futhi ibhizinisi layo laphesheya kwezilwandle liqhubekile kuze kube namuhla, futhi inabaxhumana nebhizinisi namazwe angaphezu kwayishumi! Ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo yabathengi bangaphandle, abaklami benkampani banolwazi oluningi ngemikhuba yezemfashini yaseYurophu neyaseMelika, futhi ubuhlakani babo bezemfashini akumele buthathwe njengobubukelwa phansi, obuhambisana nomqondo oyinkimbinkimbi wokusetshenziswa kwemfashini wabathengi basekhaya. Yonke imininingwane icwengisiswe ngokungenaphutha. "Kodwa iFallen Leaf kumele ibuyele ezimpandeni zayo. Noma ngabe imakethe yaphesheya isazi kangakanani, uma singeke siqoqe ithonya lomkhiqizo kubathengi basekhaya, asikwazi nokuba uphawu lomhlaba." U-Liu Jianhong uyacabanga.
Kusukela ngo-2013, i-Anxin County Uhulumeni uye balungisa ngokuphelele umkhakha phansi. U-Liu Jianhong uhambe phambili ekwakheni izindawo zokuhlanza indle ukufeza amazinga wokukhishwa kwamanzi. Ngasikhathi sinye, ukuvimbela ukungcoliswa komoya, i-boiler evuthayo yaguqulwa yamalahle yashiswa. igesi yemvelo.
Ngo-2015, i-Xueruisha Group ibhaliswe njenge-Hebei Rongdu Electronic Commerce Co., Ltd., futhi yasungula indawo eku-inthanethi ezansi kanye nekusasa lokuhweba nge-Bohai Commodity Exchange, futhi yasungula indawo enkulu yokugcina izinto enyakatho, ezibophezele ekuhlanganiseni amazinga aphansi .
Xhuma nesifunda esisha, uguqule futhi uthuthukise
Ngo-Ephreli 1, kwafika izindaba zokusungulwa kwesifunda esisha seXiong'an. Njengosomabhizinisi ongumlimi owayesebenza kanzima kusuka phansi, uLiu Jianhong wayejabule ngempela ngamathuba entuthuko edolobheni lakhe, futhi ngasikhathi sinye, wayecabanga ngokujulile ngokuthi anganikela kanjani ekwakhiweni kwesifunda esisha.
Njengosihlalo we-Hebei Down Industry Chamber of Commerce, u-Liu Jianhong uveze ukuthi uzokweseka ngokuphelele ukwakhiwa kwesifunda esisha futhi ahole ekulaleleni ukuthathwa kwezinqumo kwalesi sifunda esisha. Ngasikhathi sinye, ngokuya ngezidingo zesifunda esisha, kuhlanganiswe nezimpawu zesifunda esisha, sizokwenza yonke imizamo yokulungiselela uguquko nokwenza ngcono ibhizinisi. Okokuqala ukuqhubeka nokwandisa ihholo lombukiso eliphansi, ukwenza umsebenzi omuhle wezokuvakasha kwezimboni, nokwandisa ukuthengiswa kwemikhiqizo ephansi ngenkathi kuthuthukiswa iBaiyangdian nendawo entsha; okwesibili ukuthembela ebuhleni bezobuchwepheshe obuphakeme nobukhulu besizinda sendawo entsha ukusungula ucwaningo lobuchwepheshe obuphakeme nokuthuthukiswa kwezinto eziphansi nemikhiqizo. Ukuthembela ezinzuzweni zedatha enkulu ukwakha ikusasa futhi ubone indawo yokuthengisa eku-inthanethi yemikhiqizo ephansi. Isifunda esisha masingabi nawo umkhiqizo ophansi nomkhiqizo, kepha inkundla yokuthengisa inethiwekhi esifundeni esisha izobona ukuguqulwa kwayo nokwenza ngcono, iphinde inike amandla ibhizinisi ukuthi lihlanganyele ekwakhiweni nasekuthuthukisweni kwesifunda esisha, hhayi ukuqedwa izikhathi, nokuma kumkhuba.
Yiba nesibindi sokuthatha umthwalo wemfanelo futhi wenze iminikelo eminingi
U-Liu Jianhong uhlala ekholelwa ukuthi, ngaphezu kwemizamo yakhe yokugibela umoya namagagasi, kanye nokuthuthuka kokukhuphuka, iXueruisha Down Products Co, Ltd. ibhekele kakhulu ukuqondisa imboni ezansi ukuthi ibe sezingeni eliphakeme, eliphakeme nomkhondo wokuthuthuka osezingeni. Ngomdlandla wakhe, unesibindi sokuzama ukusungula, futhi azicebise njalo, ukunikela ngamandla akhe ebhizinisini, kubasebenzi, nakubantu bendawo. Ukukhuphuka kwebhizinisi kumlethele izihlonipho neziqu eziningi: "Isisebenzi Sikazwelonke Sezimboni Zezindwangu", "Usomabhizinisi Ovelele", "Iphini Likasihlalo weChina Down Industry Association", "Ibhizinisi Elivelele eChina Down Industry", "I-Hebei Down Industry Chamber Wezebhizinisi "omude". Njengomholi wemboni, wabamba iqhaza ekwakhiweni kwamazinga aphansi eChina Down Industry Association, futhi wahola ngenkuthalo amabhizinisi ekwakheni izindawo zokulawula ukungcola ekuvuseleleni imboni ezansi. Muva nje iminyaka, inkampani inikele ngemali engaphezulu kwezigidi ezi-2 zama-yuan emphakathini futhi yanikela ngamajakhethi angaphansi angaphezu kuka-10 000. Yanikezwa isihloko esithi "Advanced Individual" nguHulumeni Wabantu BesiFunda Se-Hebei Emnikelweni Wezemfundo kanye ne- "Charity Enterprise" yi-Anxin I-County Charity Federation.
Ukuqamba kuyingqikithi yaphakade yokuthuthukiswa kwebhizinisi nomphefumulo webhizinisi. Isu eliyinhloko nomqondo oyinhloko wokuphathwa kwamabhizinisi kaLiu Jianhong akhiwa ezungeze igama elithi "emisha". Unokuqonda kwakhe okuhlukile "kokuqamba izinto ezintsha": ukucabanga ngalokho abanye abangakucabanganga kubizwa ngokuthi ukuqamba, ukwenza izinto abanye abangazenzanga kubizwa ngokuthi ukuqamba; ezinye izinto zibizwa ngokuthi zintsha ngoba kuthuthukisa ikhwalithi yomsebenzi nempilo, ezinye ngoba zithuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi, kanti ezinye ngoba ziqinisa isikhundla sokuncintisana. Kepha ukuqamba akudingeki ukuthi kube uhlobo lwento entsha, kungabuye kufakwe ngendlela entsha. Ukupakisha izinto ezindala kubizwa ngokuthi yi-innovation, futhi ukunikeza amaphuzu amasha okungena ezintweni ezindala kubizwa nangokuthi ukuqamba; ukushintsha inani eliphelele ngaphandle kokushintsha isakhiwo kubizwa ngokuthi ukuqamba, futhi ukuguqula inani eliphelele ngaphandle kokushintsha isakhiwo kubizwa ngokuthi ukuqamba.
Impela kungenxa "yokuqamba" okuqhubekayo ukuthi inkampani yakhe ikhule usuku nosuku, futhi futhi kungenxa "yezinto ezintsha" ukuthi iXueruisha Down Products Co, Ltd. iye phambili yaya enkazimulweni. Sekuyiminyaka engaphezu kweshumi yokuphikelela okusha, okungaphezu kweshumi Ngokuhlola okungapheli, u-Liu Jianhong kanye nethimba lakhe labaphathi bebelokhu benamathele kwifilosofi yebhizinisi "yentuthuko entsha, ukwethembeka nokwethembeka", okunqobile ukuqashelwa kwabathengi kanye nokuqinisekiswa yonke imikhakha yomphakathi.